नेपाल – Page 82 – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
काठमाडौँ, १ पुस । प्रतिनिधिसभामा पाँचवटा राजनीतिक दलले मात्र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने करिव निश्चित भएको छ । मङ्सिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको जारी मतगणना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कूलमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी..
नेपालीहरुका लागी टिपिएस नविकरण गराउन एनआरएन वाशिंगटन डि सी ।अमेरिकामा अस्थायीरुपले बसिरहेका नेपालीहरुलाई अमेरिकन सरकारद्धारा प्रदान गरिएको टिपिएस सुबिधा नविकरणका लागी गैर आवासीय नेपाली संघ- एनआरएन अमेरिकाले डिसेम्बर १४ का दिन राजधानी वासिंटन डिसी..
आकर्षक तलबको लोभ देखाएर महिला बेच्ने अभियुक्त पक्राउ
काठमाडौँ, २९ मंसिर । प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न फरार अभियुक्त ग्लाल्जेन शेर्पालाई आज ललितपुर चापागाउँबाट पक्राउ गरेको छ । पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसे घर भई हाल ललितपुर सातदोबाटो बस्ने ३८ वर्षीय शेर्पालाई..
काठमाडौँ । संखुवासभा स्थायी घर भएकी शर्मिला गुरुङ्ग (नाम परिवर्तन) धरानमा नर्सिङ पढ्दै थिइन् । सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) चलाउन बानी परेकी शर्मिलालाई एकदिन सुदीप लामा नामका युवाले फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाए । सुदीपको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरेको दिनदेखि नै उनीहरु..
को हुन ती वडा सचिव जसले किर्ते गरेर भारतीयलाई नागरिकता बनाउथे
सप्तरी २८ मंसिर । सप्तरी प्रहरीले किर्ते नेपाली नागरिकता बनाउने एक गिरोहलाई पक्राउ गरेको छ । आर्थिक चलखेल गरी भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकता बनाइदिने सरकारी कर्मचारी, सहयोगीहरु पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेमा वडा सचिव, प्रशासन कार्यालयका कार्यालय..
को को बन्ने भए समानुपातिकबाट सांसद ? यस्तो छ सुची
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ खसेको एक करोड पाँच लाखमध्ये आधा मत गन्दा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमले मात्रै तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाएका छन् । त्यसैले राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा उनीहरूले मात्रै समानुपातिकको एक सय १०..
राजविराज, २८ मंसिर। प्रहरीले सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा कीर्र्ते नागरिकता बनाउने गिरोहलाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक मुकेशकुमार सिंहले राजविराजस्थित..
उल्का बर्षा सुरु हुदै नाङगै आँखाले हेर्न मिल्ने
काठमाडौँ, २८ मंसिर । आज आकाशमा उल्का बर्ष हुने भएको छ । १८ देखि पुस १ गतेसम्म सक्रिय रहने मिथुन उल्का वर्षा बिहिबार राति बढी सक्रिय हुने भएको छ । सक्रिय समयमा प्रतिघण्टा १२० वटासम्म उल्का देख्न सकिने नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीले जनाएको छ । यो वर्ष..
काँग्रेस र माओवादी मिलेर सरकार बनाउन सक्ने गणित ?
काठमान्डौं । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई देशभरबाट सरकार गठनको ‘जनादेश’ प्राप्त भएको छ । निर्वाचनमा गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने सहमतिका साथ एमाले र माओवादी मिलेर वाम गठबन्धन बनाए । निर्वाचन सकियो र दुवै दलको सोचेजस्तै..
काठमाडौँ । अघिल्लो पटकको व्यवस्थापिका संसद (संविधानसभाबाट परिवर्तित) मा २२ राजनीतिक दलले प्रतिनिधित्व गरेका थिए । पछिगठन भएको नयाँ शक्ति पार्टीमा एक सांसदले प्रवेश गरेपछि सो दल पनि संसदमा दर्ता भएर २३ पुगेको थियो । तर अब बन्ने केन्द्रीय संसदमा..